Ogaysiis —-Ogaysiis « CEELBARDAALENEWS.COM
« S/Land.Bruttal Murdrers Shatter Harmony.
Tuugtii dad qalatada ahayd oo tuugalaysi bilowday. »
August 22 – Ramadan Kariim dhamaantiin. Waxaan akhristayaasha qaaliga ah ogaysiinaynaa in shabakada warsanmag isbadal qorsho oo dhowr waji leh ku dhici doono mustaqbalka dhow. Yada oon hoos ku faahfaahin doono, isbadalku wuxuu u dhici doonaa si isdaba joog ah oon wax saamo ah ku yeelan doonin akhristaha.Wajiga hore:
Laga bilaabo wixii ka dambeeya bisha Ramadan hadii eebe idmo, waxa si rasmi ah isku badali doona magaca shabakada oo hada ah warsanmag.com. Magaca cusub waxa la arki doonaa maalinta uu isbadalo magacu. Shabakada cusubi waxay la iman doontaa qorsho cusub oonay hada lahayn warsanmag. Maamulka warsanmag oo indhowba ku jiray waraysi aan xiiladaha qorsho waydiinayno akhristayaasha, intii la codsadayba waad ka arki doontaan shabakada cusub. Islamarkaa waxaan ku dhiiri galinaynaa akhristayaasha inay noo soo gudbiyaan wixii talo ah ee ay qabaan in lagu biiriyo shabakada cusub. Dabcan markaad aragtaan, wixii talo ah eed soo jeedisaan waan tixgalin doonaa hadii eebe idmo.
Wajiga hore markuu dhamays tirmo waxa si rasmi ah u bilaami doona qoraalkii Warsan Magazine ee kasoo bixi jiray magaalada Ottawa oon intii sanadkan soo bixin. Isbadal badani ku dhici maayo qaybta qoraalka joornaalka. Magacu waa sidii aad u taqaaneen ee ahaa Warsan Magazine.
Wajigan sadexaad oo ah ka u dambeeya, wuxuu isku xidhi doonaa Warsan Magazine (qaybta qoraalka) iyo shabakada. Yaga oo mudada hore is barbar socon doona, wakhti yar dabadii – wajiga labaad ka dib, way isku xidhmi doonaan hadii eebe idmo. Taas macnaheegu waxay tahay in qoraalka Warsan Magazine islamarkaa kusoo bixi doono shabakada oo laga akhrisan doono internet ka (online).
Anaga oo rajaynayna inaad ka heli doontaan qorshaha shabakada iyo qaybta qoraalkaba, waxaan islamarkaa idinku boorinaynaa inaad wixii talo ah noosoo gudbisaan. Waan ognahay inuu akhristuhu yahay saxaha qudha ee garan kara siday wax u hagaagayaan. Fadlakum noo soo qora.
Maamulka Warsanmag oo idinle Ramadan Kariim
This entry was posted on August 22, 2009 at 10:20 pm	and is filed under 1. Tagged: 1. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.